सांसद अपहरणको यर्थाथ यही अधिवेशनमा आउँछ : नेता नेम्वाङ - Dainik Online Dainik Online
सांसद अपहरणको यर्थाथ यही अधिवेशनमा आउँछ : नेता नेम्वाङ
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार २ : ००
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकार कुनै पनि प्रकारको आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
संघीय संसदको छैटौं अधिवेशन अर्थात बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुभकामना मन्तव्य दिदै उपनेता नेम्वाङले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको र आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको बताउनुभएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा बोल्दै सांसद अपहरण जस्तो अवाञ्छित र आपराधिक गतिविधिमा सरकार संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि उपनेता नेम्वाङले सरकारको बचाउ गर्नुभएको हो। उहाँले ‘सांसद अपहरण’को यथार्थ यसै अधिवेशनमा आउने पनि बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “सांसदको अपरहणको कुरा विवादै छैन। कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरु हुनु हुदैन। तर भएको के हो? यथार्थ के हो? त्यस सम्बन्धी कुराहरु पनि यही संसद चल्दा चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी कुनै प्रकारका आपराधिक कार्यहरुको पक्षमा छैनौ।”
उहाँले घुमाउरो शैलीमा सरकार जवाफदेही र पारदर्शी भएको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो अधिवेशनले एउटा राम्रो निष्कर्षमा हामीलाई पुराउन सकोस् । देशलाई जवाफदेहीता र पारदर्शीताको टुंगोमा, निष्कर्षमा पुर्याउन यो अधिवेशनले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् । यसमा हाम्रो भुमिका रहन्छ । हाम्रो सहयोग रहन्छ।”
उहाँले मुलुक अत्यन्तै अप्ठ्यारो र चुनौतिपुर्ण अवस्थामा रहेकाले समस्या सम्बोधन गर्ने सन्र्दभमा सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले कारोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन विकल्पहिन बाध्यता र आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाले क्षति पुराएको विविध पक्षको सम्बोधन गर्नका यो अधिवेशनमा आधारहरु तय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यता रहेकाले त्यस अभियानमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास आफुले लिएको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत सम्पुर्ण प्रतिपक्षी दललाई कोरोना विरुद्धको लडाईमा एकजुट भएकोमा सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाँले यो अधिवेशनले बजेट संगै शान्ति प्रक्रियाका बांकी कामलाई पनि अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोग सम्बन्धी कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको यसै अधिवेशले टुंगो लगाउने विश्वास आफुले लिएको बताउनुभयो ।